Yonke into omele uyazi ngeTadalafil -Buyaas
Tadalafil powder (I-171596-29-5) lunyango lukamayeza olufumaneka ngeendlela ezahlukeneyo zomlomo ezinjengethebhulethi kunye nomgubo. Eli chiza liyafumaneka kwimarike phantsi kwamagama ohlobo oluhlobo olufana neAcirca kunye neCialis. Kwakhona, i-tadalafil ikhona ngohlobo lwayo oluhlobo. Nangona kunjalo, awucetyiswa ukuba usebenzise i-generic tadalafil powder njengoko inokungabikho kwawo onke amandla amachiza okuqala; ke, kuya kufuneka ulumke xa uthenga eli yeza njenge-tadalafil. Qinisekisa ukuba uthenga ifom ye-tadalafil efanelekileyo yeziphumo ezingcono. Ugqirha wakho uya kukukhokelela kwindlela kunye nalapho ungathenga khona umgangatho weTadalafil powder.
Tadalafil (171596-29-5) isetyenziswa phantsi kwegama lamagama ohlukileyo ukunyanga iimeko ezahlukeneyo zempilo. Umzekelo, i-Cialis isetyenziswa ikakhulu kunyango lokungasebenzi kakuhle komzimba okanye ukungasebenzi kumadoda kunye ne-benign Prostatic hypertrophy, ebizwa ngokuba yindawo ebanzi yokwanda kweprostate. Kwelinye icala, iAdcirca, ekwayenye uphawu lwe-tadalafil, isetyenziselwa unyango lwe-pulmonary arterial hypertension. IAdcirca ikwasetyenziselwa ukuphucula amandla okwenza umthambo kumadoda nabasetyhini abaneengxaki zepropathi ye-pulmonary arterial.
Kuhlala kucetyiswa ukuthatha eli chiza phantsi kwesikhokelo sikagqirha wakho ukuphepha ukujongana neziphumo ezibi kakhulu. Nokuba ungafikelela njani ngokulula kwi-tadalafil powder ungayithathi ngaphandle kokwenza uvavanyo lonyango. Ngenxa yokuba ichiza sele lisebenzela umhlobo wakho, ayizenzekeli ezakuzisa iziphumo ezisemgangathweni kuwe. Imizimba yabantu yahlukile, yiyo loo nto ke ugqirha ekufanele ukuba athathe isigqibo malunga nethamo elifanelekileyo emva kovavanyo lwempilo yakho. Xa isetyenziswe gwenxa okanye i-overdved, i-tadalafil inokukhokelela kwiziphumo ezibi ezinokubiza iindleko zokubuyela umva kwaye ngamanye amaxesha zingenakuphinda ziguqulwe.
Eli chiza likwenyusa ukugeleza kwegazi emzimbeni wakho ukuya kwilungu lobudoda, elincedayo ekufumaneni nasekugcinweni kwendalo. I-Tadalafil isetyenziswa ikakhulu kunyango lokungasebenzi kakuhle emzimbeni kwamadoda, kodwa kukunceda kuphela xa uthe wavuka ngokwesondo. Ukulungiswa kwe-penal kwenzeka xa ipenis izele ligazi. Ukuqalwa kwenzeka emva kokuba imithambo yegazi enoxanduva lokunikezela ngegazi inciphise kunye noncedo lwegazi ngelixa ezo zinikwe umsebenzi wokususa igazi kwikhontrakthi yobudoda. Xa igazi liqokeleleka kwilungu lobudoda lakho, libangela ukuvela. Izifundo zibonakalise i-tadalafil ikhulisa amandla okufumana ii-erections ezinzima kunye ezizinzileyo kuninzi lwamadoda ane-erectile dysfunction.
I-Tadalafil kufuneka ithathwe kanye ngeyure nganye ye-24. Xa ungalufumani ulungiso olwenzileyo, musa ukongeza enye umthamo ngosuku olunye. Kuqhelekile kubasebenzisi be-tadalafil okokuqala ngqa ukuba babe namava ukulibaziseka ekufumaneni iziphumo ozifunayo. Imizimba yabantu yahlukile, njengoko kuchaziwe ngaphambili kweli nqaku. Abanye abantu banokufumana iziphumo ze-tadalafil powder ngaphakathi kwexesha le-30 ngelixa abanye befumana ukulibaziseka. Nangona kunjalo, ogqirha bacebisa ukuba uthathe umthamo wechiza malunga neentsuku ezisibhozo ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuya kuthatha ithamo eliphezulu okanye olunye unyango.
Ngakolunye uhlangothi, i-tadalafil powder ikwasetyenziswa kunyango lweempawu ze-benign prostatic hyperplasia (BPH). Ichiza banciphise iimpawu ze-BPH ezinjengomsinga obuthathaka, ubunzima ekuqaliseni kokuhamba komchamo, kunye nokuchama rhoqo, ngakumbi ezinzulwini zobusuku. Apha i-tadalafil ikunceda ngokuphumla ibhedi egudileyo kunye nezihlunu ze-Prostate. Nangona kunjalo, ungathengi kwaye uqalise ukusebenzisa i-tadalafil powder nokuba ufumana iimpawu ze-BPH ngaphambi kokuba uvavanywe kunyango. Khumbula ukuba iyeza kufuneka limiselwe ngugqirha ngalo lonke ixesha.
Ugqirha uchaza i-tadalafil powder kubantu abane-pulmonary arterial hypertension (PAH). Le yimeko apho kukho uxinzelelo lwegazi oluphezulu kwimithambo yakho ethwele igazi ukuya kwimiphunga, kwaye ekhokelela kwisisi, ukuphefumla okufutshane, nokudinwa. Uninzi lwabantu abanengxaki yale meko bakufumanisa kunzima ukwenza umthambo rhoqo. Nangona kunjalo, iindaba ezimnandi kukuba i-tadalafil powder idlala indima ebalulekileyo ekuncedeni izigulana ze-PAH ukuba zenze umsebenzi wazo kakuhle ngokunciphisa imeko yemizimba.
I-Tadalafil dosage ingahluka ukusuka komnye umsebenzisi ukuya komnye, ngokuxhomekeke kwisizathu sokusetyenziswa kwayo. Imeko yempilo yakho kunye nendlela umzimba wakho ophendula ngayo kwichiza nayo iyakuba nefuthe kumthamo wakho. Nangona kunjalo, kusoloko kucetyiswa ukuba uqale ngethamo eliphantsi elicetyiswayo, elinokunyuswa kamva ngugqirha wakho emva kokuvavanya inkqubela phambili kumayeza. Ungaze uhlengahlengise ithamo ngaphandle kokuchazela amayeza akho njengoko kunokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu okanye usilele ukuzisa iziphumo ezilindelekileyo. Iidosi zeTadalafil powder zezi zilandelayo;
Le dosi yedatha ye-tadalafil yenzelwe eyindoda ngobunzima bokufumana kunye nokugcina ii-erections ezinzima. Umthamo wokuqala ocetyisiweyo yi-10mg ekufuneka ithathwe ngomlomo kanye ngosuku okanye imizuzu ye-30 ngaphambi kokuba ungene kwisenzo sesondo. Ukuba awuziva iziphumo, kuya kufuneka uthathe umthamo wakho oqhelekileyo kangangeentsuku ezisibhozo, ke undwendwela ugqirha wakho ukuze ulungelelanise idosi. Abanye abantu bafumana ukulibaziseka ekufumaneni iziphumo, ngakumbi ixesha lokuqala abasebenzisi be-tadalafil. Nangona kunjalo, umthamo unganyuswa uye kwi-20mg ngemini. Ukulungiswa kwethamo ye-tadalafil powder ukusuka kwi-5 ukuya kwi-20mgs ekufuneka ithathwe kanye ngemini njengoko kufuneka okanye ngaphambi komtshato. I-Tadalafil yedosi ye-ED ixhomekeke kunyamezelo lomntu ngamnye kunye nokusebenza ngempumelelo. I-dosage inokwehliswa ngakumbi kubasebenzisi abanolwazi oluphambili lweziphumo kunye nasemva kokuthatha umthamo ophantsi we-10mgs ngemini.
6.I-Tadalafil powder isiqingatha sobomi
Kuhlala kucetyiswa ukuba uthathe umthamo we-tadalafil powder kanye ngemini kwaye ukuba awuyifumani iziphumo ungathathi enye ithamo ngaphakathi kweeyure ze-24. Iziphumo ze-Tadalafil powder zinokulibaziseka kwabanye abasebenzisi, kodwa oko akuthethi ukuba ufanele uthathe idosi eyongezelelweyo ngosuku olunye. Abasebenzisi be-tadalafil bexesha lokuqala banokufumana ukulibaziseka, kodwa ekuhambeni kwexesha bafumane ii-erections eziyifunayo.
Kanye njengokuba i-tadalafil powder sisiyobisi esinamandla esinokunceda abantu kunyango lweemeko ezahlukeneyo zempilo, ukuba sisetyenziswe gwenxa okanye sigqithe kakhulu sinokukubonakalisa kwezinye iziphumo ezibi. Uninzi lwe iziphumo ze-tadalafil powder kungenxa yokusetyenziswa gwenxa kunye nendlela umzimba wakho ophendula ngayo kwichiza. Ngokwesiqhelo, abanye abantu banokusilela ukonwabela izibonelelo zechiza nasemva kokuba uthathe idosi efanelekileyo. Abanye abasebenzisi banokufumana iziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa kunabanye. Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ze-tadalafil zinokunyamalala kunye nexesha, kwaye zihambe ngolu hlobo lulandelayo;
Ukhululekile ukuba Thenga i-tadalafil powder ininzi okanye zanele nje usuku lwakho olunye okanye iintsuku ezimbalwa zokuhamba ngokuxhomekeka kuncomelo lukagqirha wakho. Baninzi abathengisi be-tadalafil ipowder kwimarike namhlanje, kodwa qiniseka ukuba uyifumana kumvelisi othembekileyo nomthengisi. Ayingabo bonke abathengisi oza kubo emarikeni abaneziyobisi ezisemgangathweni. Khumbula, ukuba ungcono kwaye ukhawuleze iziphumo; kuya kufuneka usebenzise umgubo we-tadalafil esemgangathweni ngalo lonke ixesha. Kukho uhlobo oluhlobo lwe-tadalafil powder, olunokungabi nazo iimpawu ezithile kwaye lungangabi nakho ngokwaneleyo ukunyanga imeko yakho.
Umhlaba uyatshintsha, kwaye ngokungafaniyo neentsuku ezithile emva, unako ukuthenga i-tadalafil powder kwi-intanethi kwiwebhusayithi yethu kwaye ufumane imveliso yakho ngexesha elifutshane kakhulu. Ungangena kwindawo yethu nge-smartphone yakho, ithebhulethi, okanye ilaptop kwaye wenze i-odolo lakho kwindawo yokuthuthuzela kwekhaya lakho okanye eofisini. Ngenye indlela, usengafumana i-tadalafil powder evela kwikhemesti yakho yendawo. Nangona kunjalo, sihlala sicebisa abathengi bethu ukuba balumke kakhulu xa bejonga umthengisi we-tadalafil umgubo ophucukileyo nokuba sikwi-Intanethi okanye ngokwasemzimbeni. Abanye abathengisi beziyobisi banokugcina iimveliso ezisemgangathweni ezisezantsi eziya kuthi zisilele ukuzisa iziphumo eziqinisekileyo okanye ekugqibeleni zivelise kwiziphumo ezibi kakhulu.
Ezi ziyobisi zimbini zefosphodiesterase-5 (PDE5), kwaye oko kuthetha ukuba baphantse basebenze ngendlela efanayo. I-tadalafil powder kunye ne-sildenafil citrate powder zininzi ngokufanayo, kwaye zisetyenziselwa ukuphatha ukungasebenzi kunye nokungasebenzi kwe-erectile emadodeni. Nangona kunjalo, la mayeza mabini anokusebenza kuphela xa umsebenzisi evukile. Xa ulandela yonke imiyalelo yethamo, i-tadalafil kunye ne-sildenafil citrate powder inokukunceda ukuba ufumane ii-erections eziqinileyo kunye nexesha elide.
Ngokumalunga nokusebenza, i-tadalafil powder isebenza ngaphakathi kwe-16 ukuya kwimizuzu ye-45 emva kokuthatha idosi yakho. Kwelinye icala, i-sildenafil ihambisa iziphumo ngaphakathi kwemizuzu ye-30, kwaye xa uthatha ukutya okunamafutha aphezulu, inokuchaphazela ukusebenza kwesiyobisi. Ke, i-sildenafil citrate powder kufuneka ithathwe kwisisu esingenanto ukufumana iziphumo ezingcono. Phantse konke ukusebenza kwe-PDE5 inhibitors kusebenza ngokufanayo. Nangona kunjalo, ngaphandle kokusebenza kwe-sildenafil emi kwi-84% kunye ne-tadalafil kwi-81%, amadoda amaninzi akhetha ukuthatha i-tadalafil powder kuba inefuthe lokuhlala ixesha elide.
I-Tadalafil powder inokuthathwa xa ifuneka okanye imihla ngemihla. Ngokwesiqhelo, iidosages zemihla ngemihla ze-tadalafil zincinci kuneyure efunekayo. Umzekelo, i-10mgs yiyithamo ye-tadalafil ngaphambi kokusebenza ngokwesondo. Nje ukuba kuthathwe, iimpembelelo ziya kuhlala malunga neeyure ze-36. Ugqirha wakho unokunyusa i-dosage kwi-20mg okanye ayinciphise kwi-5mg xa iziphumo ebezingalindelekanga. Kumthamo wemihla ngemihla, i-dosage ye-tadalafil powder ecetywayo yi-2.5mg ye-ED kunye ne-50mg xa unyanga i-BPH. Abasebenzisi bayacetyiswa ukuba bangayenzi i-tadalafil dosage ngaphandle kwengcebiso kagqirha yokunciphisa iziphumo ebezingalindelekanga.
I-Sildenafil citrate powder kufuneka ithathwe kanye ngosuku kunye neyure ngaphambi kokuba uzibandakanya kwisondo. Iyeza kufuneka lithathwe ngokwesidingo, kwaye idosi leyo icetyiswayo yi-50mgs, ongayithatha nemizuzu ye-30 okanye iiyure ezine ngaphambi kwesondo. Ngamanye amaxesha, i-sildenafil citrate powder dosage inokunyuswa kwi-100mgs ukuba i-50mg dosage iyasilela ukuzisa iziphumo ezifunwayo. Ugqirha wakho unakho ukunciphisa i-dosage kwi-25mgs ukuba ngaba uneziphumo ezibi ezinganyamezelekiyo. Kanye njenge-tadalafil, i-sildenafil citrate powder kufuneka ithathwe kanye ngosuku nokuba awuyifumani iziphumo ngaphakathi kweeyure ze-4.
Ezi ziyobisi zimbini, xa zisetyenziswa kakhulu okanye zisetyenziswe gwenxa, zinokukhokelela kwimiphumo emibi efanayo njengokugungxuka, iintloko entloko, kunye nokudumba. Nangona kunjalo, ukuqonda kombala kunxulumene ngakumbi ne-sildenafil citrate powder. Iindaba ezimnandi zezokuba zonke iziphumo ebezingalindelekanga ezichaphazela iziyobisi zinokulawulwa ukuba ufuna unyango kwangoko. Zive ukhululekile ukubonana nodokotela okanye ugqirha wezamayeza ngolwazi oluthe kratya malunga i-tadalafil powder kunye ne-sildenafil citrate powder.
Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, A., Koka, S., Ockaili, RA, & Xi, L. (2011). Ukusetyenziswa okutsha kokusetyenziswa kwe-phosphodiesterase-5 inhibitors kwizifo zentliziyo. Uvavanyo lwempilo kunye nonyango lwekliniki, 16(4), e30.
Uninzi, ME, Senbel, AM, & Mostafa, T. (2013). Isiphumo se-tadalafil yedosi ephantsi enezifo ezisezantsi kwi-penile cavernous izicubu kwizifo zeswekile. Urology, 81(6), 1253-1260.
UKaya, B., Çerkez, C., Işılgan, SE, Göktürk, H., Yığman, Z., Serel, S.,… & Ergün, H. (2015). Ukuthelekiswa kweziphumo zenkqubo sildenafil, tadalafil, kunye ne-vardenafil kunyango lokusinda kweflash yesikhumba kwiigundane. Ijenali yotyando lweplastiki kunye nokuhlinzwa kwezandla, 49(6), 358-362.
UPorst, uH., URoehrborn, CG, uSecrest, uRJ, uEsler, uA. NoViktrup, uL. (2013). Iziphumo ze-tadalafil kwiimpawu ezisezantsi zomchamo wesibini kwi-benign ye-hyperplasia ye-benign nakwi-erectile dysfunction kumadoda abelana ngesondo kunye nazo zombini ezi meko: Uhlalutyo lwedatha ye-pooled evela kwizifundo zeklinikhi ezine ezingahleliwe, ezine-placebo. Inkcazelo yeyeza zonyango, 10(8), 2044-2052.